ဓာတ်ပုံသတင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 79
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ(နိုင်/ကျဉ်း) က မီးဘေးသင့်ဒုက္ခသည်များကို လှူဒါန်း တာရာဝေယံ။ ၂၅ မတ် ၂၀၁၂။ ရန်ကုန် နိုိင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ(နိုင်/ကျဉ်း)မှ အဖွဲ့ဝင်များက ယမန်နေ့နံနက် ၁၁း၀၀နာရီ က တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ၄/ရပ်ကွက် ဓမ္မာရုံရှိ မီးဘေးဒုက္ခသည်များအား အ၀တ်အထည်၊ ပန်းကန်ခွက်ယောက်၊ သွားတိုက်ဆေး အစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၆၊ မတ်၊ ၂၀၁၂ နေ့က တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ၄/ရပ်ကွက်၊ သုတ(၁)လမ်း မှာ လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မီးဘေးကြောင့် အိမ်ခြေ(၁၄)လုံး၊ အိမ်ထောင်စု (၂၂) စု၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၂ယောက် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
မိုးမခ (ဓာတ်ပုံသတင်း) မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားရင်ပြင်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဖြစ်သူ အရှင်ဝီရသူဦးဆောင်ပြီး သံဃာတော်များနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင်များနှင့် ဒေသခံ ၅၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့သည့် ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲတရပ် ကျင်းပခဲ့ပါ တယ်။ မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်ကနေပြီး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ အရှင်ဝီရသူဟာ ထောင်တွင်းမှာကျန်ရစ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်း ဆန္ဒပြခြင်းနဲ့ ၀တ်ပြုဆုတောင်မှုများကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုကျင်းပသည့် အဆိုပါ ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲမှာ ဘုရားကြီး သြ၀ါဒဆရာတော်များနှင့် တိုင်းသံဃမဟာနာယက ဆရာတော်များ ခွင့်ပြုခြင်းမရှိသည့်ကြားမှ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် နောင်ဖြစ်လာမည့် အကျိုးဆက်များအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းကိုလည်း အရှင်ဝီရသူက မိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ...
Yangon Press International www.facebook.com/ygnpress ဓာတ်ပုံသတင်း မတ်လ ၂၂ ၊ ၂၀၁၂ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၎င်းအရွေးချယ်ခံမည့် ကော့မှူးမြို့နယ်သို့ စတုတ္ထအကြိမ် စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် သွားရောက်ခဲ့သည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဓာတ်ပုံသတင်း မတ် ၂၀၊ ၂၀၁၂ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြောင်းမြမြို့နယ် ၊ ရှမ်းရေကျော်ကျေးရွာ NLD ရုံးက ပိုစတာတွေ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ညက ဖျက်ဆီးခံရပါတယ်။ NLD ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မန်းဂျော်နီ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ ပါတဲ့ ပိုစတာတွေပါ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လားရှိုးမြို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ် – NLD campaign in Lashio
Burma VJ Media Network ဓာတ်ပုံနှင့် ရုပ်သံ မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၂ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စိုင်းမြင့်မောင် No tags for this post. Related posts No related posts.
Amnesty Prison Art Show 2012 ပိတ်ပွဲနေ့ စည်ကား တာရာဝေယံ၊ မတ် ၁၆၊ ၂၀၁၂ လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းခွင့်၊ နံရံကြားမှ အနုပညာပြပွဲ ပိတ်ပွဲနေ့ (၁၅ မတ်၊၂၀၁၂) နေ့က မြင်ကွင်းတွေပါ။ ဆရာဦးဝင်းတင်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုမြအေးတို့ လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမျိုးအောင်နိုင်၊ ဦးခင်မြင့်အောင်၊ ကိုမြင့်ဝင်းမောင်တို့က သူတို့ရဲ့ Digital Print ပန်းချီကားတွေနဲ့ ပို့စကဒ်တွေပေါ်မှာ အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုး ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဓာတ်ပုံသတင်းမတ် ၁၂၊ ၂၀၁၂ NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိနေစဉ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကိုလည်း တက်ရောက် လေ့လာခဲ့သည်။ (ဓာတ်ပုံများ – AP)အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် No tags for this post. Related posts No related posts.
တာရာဝေယံ – Sights of Burmese Amnesty Art Show
လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းခွင့် ပန်းချီပြပွဲ မြင်ကွင်း တာရာဝေယံ။ ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၀၊ ၂၀၁၂ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူမျာ အကျဉ်းထောင် နံရံများအကြား ရေးဆွဲခဲ့ကြတဲ့ ပန်းချီအနုပညာများအား စုစည်း ပြသသည့် လွတ်လပ် ငြိမ်းချမ်းခွင့် အမည်ပေးထားသည့် ပန်းချီပြပွဲကို ယနေ့ နံနက် ၉နာရီခွဲက ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း စာပေလောက ၅ စာအုပ်ဆိုင် အပေါ်ထပ်မှာ ကျင်းပခဲ့သည်။ ပန်းချီကားများကို ခံစားနိုင်ရန် တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ကိုဋ္ဌေးကြွယ်၏ လက်ရာ ကိုအေးမင်းဖြိုး ကိုလှိုင်ဝင်းဆွေ ခင်မြင့်အောင် ကိုအောင်နိုင် ကိုဋ္ဌေးကြွယ် မင်းကိုနိုင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုပြုံးချို ကိုပြုံးချိူ ကိုပြုံးချို ကိုစံမင်း ကိုဇေယျ၊ ကိုဘောင်းဘောင်း၊ ကိုသက်ဇော် ကိုဋ္ဌေးကြွယ် ကိုဂျင်မီ ကိုဂျင်မင်၊...
ဓာတ်ပုံသတင်းမတ် ၉၊ ၂၀၁၂ “တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွေလုပ်ပြီး စတင်နေတဲ့ မြန်မာပြည် အပြောင်းအလဲမှာ အနာဂတ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နယ်စပ် တနေရာမှာ ဘုရားထုနေပါတယ်” ဟု ကာတွန်းဆရာ ဟန်လေးက သူ၏ Facebook တွင် ယနေ့ ရေးထားသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းခွင့် ပန်းချီပြပွဲ ကျင်းပ မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း၊ ရန်ကုန်၊ မတ် ၉ ၊ ၂၀၁၂ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူမျာ အကျဉ်းထောင် နံရံများအကြား ရေးဆွဲခဲ့ကြတဲ့ ပန်းချီအနုပညာများအား စုစည်း ပြသသည့် လွတ်လပ် ငြိမ်းချမ်းခွင့် အမည်ပေးထားသည့် ပန်းချီပြပွဲကို ယနေ့ နံနက် ၉နာရီခွဲက ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း စာပေလောက ၅ စာအုပ်ဆိုင် အပေါ်ထပ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ပန်းချီကားများတွင် အကျဉ်းထောင် နံရံအတွင်း နေထိုင်စဉ် ခံစားရသည့် စိတ်ခံစားမှုများ၊ အတွေးများကို ထင်ဟပ်နေသည်ကို ခံစားတွေ့မြင်ရသည်။ ပန်းချီကားများကို ၀ယ်ယူလိုပါက ရောင်းချပေးမည်ဟု လည်းသိရသည်။ ပြပွဲစီစဉ်သူများမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းမျာဖြစ်ကြသည့် ကိုထွန်းဝင်းငြိမ်း၊ ကိုဘသက်အောင်၊ ကိုဇော်ရဲဝင်း၊ ကိုထွန်းကြည်၊ ကိုကျော်ကျော်ထွေး၊ ကိုဆန်နီစသည်တို့...